Taratasim-pifandraisana RV : Midira anatin’ny sehatra fifanakalozan-kevitra anaty aterineto ho an’ny tambajotram-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-pifandraisana RV : Midira anatin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra anaty aterineto ho an'ny tambajotram-piarahamonina
Miaraha amin'ireo olona mitovy fisainana aminao ao amin'ny #CommunityNetworks Group!
Voadika ny 13 Oktobra 2019 18:44 GMT
Pikasary avy ao amin'ilay sehatra fifanakalozan-kevitra Community Networks Group.
Manangana tambajotram-piarahamonina na ISP kely ao an-toerana ve ianao, na liana ny hanao izany? Eritrereto ny fiarahana amin'ireo olona mitovy fisainana aminao ao amin'ny #CommunityNetworks Group!
Ny #CommunityNetworks Group dia “vondrom-pianarana ho an'ireo mpikarakara sy mpandraharaha tambajotra ao an-toerana, isan'izany ireo tambajotram-piarahamonina, ireo kôperativa, ary ireo mpandraharaha madinika.” Anatin'ity sehatra fifanakalozan-kevitra ity, sady azonao atao ny manatona ireo mpikambana hafa anatin'ny vondrona mba hahazoanao vahaolana mahomby amin'ireo fanamby mipetraka, no azonao atao ihany koa ny mizara fahalalàna sarobidy amin'ny hafa manao ezaka mitovy amin'izay. Liana? Maninona raha mitsidika izany mihitsy ianao ary mijery izay zava-miseho ao anatin'ilay vondrona? Tafiditra anatin'ireo lohahevitra amin'izao ny fizaràna traikefa sy fitaovana fianarana, ao ihany koa ireo fanadihadiana tranga avy amin'ireo faritra samy hafa manerana izao tontolo izao.
I Justin Sègbédji Ahinon momba ny teny Fon, ampiasaina indrindra ao Benin, sy ny fidiran'ny teny (Afrikana) anatin'ny sehatry ny teknolojia
I Aremu A. Adeola, Jr. momba ny teny Yoruba, ampiasaina ao Nigeria, sy ireo olana mikasika ny teny ao amin'ny firenena
I Jeiser Suarez Maynas [es] momba ny teny Shipibo-Konibo ao amin'ny Amazonia Peroviana
I Yamanik Cholotío [es] momba ny teny Tz'utujil, teny Mayana fampiasa ao amin'ny Farihin'ny faritra Atitlán ao Goatemalà
@NativeLangsTech (Amerika Avaratra)
I Candace Kaleimamoowahinekapu Galla momba ny teny Hawaiana ao Hawaï, Etazonia
I Belinda Daniels momba ny teny Cree, fampiasa ao amin'ny Firenena Voalohan'ny Farihy Sturgeon, Saskatchewan, Kanadà
I Lokosh (Joshua D. Hinson) momba ny teny Chickasaw an'ny Firenena Chickasaw, avy any Atsimo Atsinanan'i Amerika ary mitoetra ao Oklahoma, Etazonia ankehitriny
I Benson KC Fang momba ny teny Taivoan, fampiasa ao Taiwan
I Mulihay Talus momba ny teny Sakizaya, fiteny ao Taiwan
Mampiasa ireo antontantaratasy tahiry saropady izay mila havadika ho nomerika mba hotehirizina sy/na hotsirihina ianao? Manangona ireo fandraisana anjara amin'ny fihodinana vaovaon'ireo tetikasa vatsiany isan-taona ny Endangered Archives Programme, mikendry ny hanohana ireo fikarohana midina an-tsehatra amin'io lafiny io. Manasa anao hitsidika ny vohikalany raha mila fanazavàna fanampiny. Faran'ny fisoratana anarana: 11 Novambra 2019 amin'ny mitataovovonana (GMT)
Ho fahatsiarovana ny namana mpitati-baovao iray efa nodimandry, manao ny Maripankasitrahana Kate Webb 2019 ny Agence France-Presse ho fanomezam-boninahitra ireo mpanao gazety Aziatika manao ny asa fandrakofany ao amin'ny faritr'i Azia- Pasifika na inona na inona mitranga. Ho an'ireo mpanao gazety an-tsary, an-dahatsary na an-tsoratra: Manasa anareo hijery ireo antsipiriany eto. Faran'ny fisoratana anarana: 15 Novambra 2019 amin'ny misasakalina (oran'i Hong Kong) (16:00 GMT)
Tany amin'ny faraparan'ny 2018, namoaka tatitra fohy momba ireo fahasamihafàna ara-nomerika, izay tsy dia hita mibaribary kanefa goavana tokoa, manerana ireo firenena 61 manana fidirambola ambany sy antonony, ny Alliance for Affordable Internet (A4AI). Manampy mampahafantatra ny fahasamihafàna eo amin'ny fidirana aterineto sy ny fidirana malalaka ary koa ny risika amin'izany ny fikarohana nataon-dry zareo. Manasa anao hijery ny tatitra iray manontolo eto ary eto kosa ho an'ireo angondrakitra mifandraika amin'izany.
Vao haingana, nizara ny fanadihadiany farany momba ny vidin'ny angondrakitra any amin'ireo firenena 100 manerana an'i Afrika, Amerika ary Azia manana fidirambola ambany sy antonony ihany koa ny A4AI. Asehon'izany fa nahitàna fihenana 11,24% ny vidiny mirary amin'ny sandanà angondrakitra 1GB, araka ny norefesina tamin'ny fidirambola antonony isam-bolana tao amin'ireo faritra nanaovana fanadihadiana, ary nahatonga ny Aterineto afaka nidirana kokoa ho an'ireo an-tapitrisany maro hafa. Raha mila ny antsipiriany, manasa anao hijery eto.
Teknolojian'ny Fifindramonina sy ny Fifandraisana ao Amerika Afovoany: Famindra Fijery Mitsikera ireo Fotodrafitrasa ho an'ny Tambajotra sy ny Tsy Fitoviana ao amin'ny bilaogy Global Media Technologies and Cultures Lab
Ny antony mahatonga ny fidirana nomerika ho fanalahidy hanatrarana ny fitoviana ao amin'ny theguardian.com (Guardian News & Media Limited)
Ny Media, Fitaovana iray Hizaràna ny Fahalalan-janatany ao amin'ny Cultural Survival
Inona ny dingana manaraka hitehirizana ny haren-tenin'ireo Vahoaka Zanatany? Ankoatra ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin-janatany ao amin'ny Völkerrechtsblog
Ny OER sy ireo creative commons izay afaka manampy mitahiry ny tenin-janatany ao amin'ny vohikala manokan'i Christer Gundersen
Misaotra an'i Eddie Avila tamin'ny fandraisany anjara tanatin'ity taratasim-pifandraisana ity.